लोकतान्त्रिक गाडी र चलाउने ड्राइभर - Pradesh Today
Homeफिचरलोकतान्त्रिक गाडी र चलाउने ड्राइभर
लोकतान्त्रिक गाडी र चलाउने ड्राइभर
गाडी जति नयाँ भएपनि, गाडी जति नयाँ मोडेलको भएपनि, गाडी जति राम्रो र बलियो कम्पनीको भएपनि, गाडी जति चलेको र आकर्षक भएपनि, गाडी जति महँगो र आरामदायी भएपनि त्यो आफै कदापि गुड्दैन ? त्यो आफै किमार्थ चल्दैन र त्यो आफै कहिल्यै दौड्दैन ।
त्यसलाई चलाउन, गुडाउन, सञ्चालन गर्न र गतिमा ल्याउने त्यत्तिकै सक्षम, सिपालु, दक्ष, निपुण र अनुभवी चालक वा ड्राइभर चाहिन्छ । यदि चालक कूशल र ज्ञाता छ भने पुरानो भन्दा अति पुरानो गाडीलाई पनि नयाँ ढंग र प्रविधिले मर्मत र सम्हार गर्दै नयाँ गाडी सरह मानव सेवामा समर्पित हुने दीगो साधन बनाउन सक्दछ ।
यदि चालक असक्षम, अनविज्ञ र जबरजस्तको रहेछ भने जस्तोसुकै गाडीलाई पनि भड्खोलामा पार्न सक्छ र दुर्घटनामा विसर्जन गर्नसक्छ । त्यसकारण गाडी आफैमा राम्रो त हो, त्यसको स्टिरिङ पकड्ने, होल्ड गर्ने वा समाएर घुमाउने व्यक्ति कस्तो हो वा छ ?
हेर्न, जान्न, बुझ्न र चिन्न निकै जरूरी छ । हामी यात्रामा पनि गाडीको आउनलुक भन्दा त्यसको चालक विचार्नु पर्दछ । चालक यदि व्यवहारिक र परिपक्व छैन भने मिनेट भरमा गाडी समस्यामा फस्छ वा दुर्घटनामा पर्दछ ।
त्यसैले हरेक कुरामा चालक, सञ्चालक, निर्देशक, संयोजक तथा नेतृत्वदायी भूमिकाको तहमा रहने व्यक्तिको गुण, विशेषता, आचरण, चरित्र, संस्कार, सोंच, विचार, भावना, चाहना र कामनामा भर पर्दछ । हाम्रो देश नेपालमा २००७ सालअघि वा त्यसभन्दा पछि कति राजनीतिक परिवर्तन भए र तिनले देश र जनतामा कस्तो सेवा प्रवाह गरे ?
ती सबै राजनीतिक व्यवस्था नेपालमा किन देश र जनताका लागि सार्थक र औचित्य पुष्टी हुन सकेनन् ? के नेपालमा हिजो भएका र आज आएका सबै जति कमसल र अलोकप्रिय हुन त ? अवश्यमेव त्यस्तो होइन । कुरा के हो भने नेपालमा जहिले पनि असल नेता र असल नेतृत्वको खाँचो र अभाव परकै हो ।
विपीको समयदेखि यता बिपीको शाशनकालपश्चात् नेपालमा दूरदर्शी नेता भएकाले काम गर्ने पाएनन् वा देशभक्त तथा जनप्रेमी नेतालाई काम गर्नै दिइएन । जो हावाको भरमा, जो जिद्दीका भरमा, जो हठीका भरमा बाहिरी प्रभु र शक्तिको आडमा काम गर्ने बानी बसेकाहरूले देश चलाउँदा आजसम्मको अवस्था यथास्थितिमा आइपुग्यो ।
अर्थात् राजनीति व्यवस्था नामको जति राम्रो, जति असल, जति उत्कृष्ट र जति चर्चित गाडी देशमा भित्र्याए पनि त्यो गाडी हाँक्ने सारथी वा चालक वा ड्राइभर गन्तव्यहीन बन्न पुग्यो जसका कारण त्यो गाडी जहाँ जानुपर्ने हो त्यहाँ जान र पुग्न सकेन । अर्थात् त्यो गाडीमा जसलाई ओसार्नु र बोक्नु पर्ने हो तयसलाई ओसार्न र बोक्न सकेन ।
नेपालमा आजसम्म भएकै त्यही हो । यदि देशको व्यवस्था हाँक्ने सारथी योग्य, दक्ष, कुशल, निुण र दूरदर्शी हुन्थ्यो भने आज राजनीतिबाट कोही पनि प्रताडीत हुने थिएनन् । राजनीतिमा जनताको वितृष्णा मौलाउने थिएन । राजनीतिमा जनताको मोह घट्ने थिएन । राजनीतिमा जनताको आकर्षण कमजोर हुने थिइन । राजनीतिमा जनताको चासो मर्ने थिएन ।
आज हामी नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई विश्वसामू देखाएर दाँज्दैछौँ र भन्दछौँ– हाम्रो व्यवस्था विश्वकै नमुनाको व्यवस्था हो र उत्कृष्ट व्यवस्था हो । तर यति उत्कृष्ट व्यवस्थाको गाडीमा सवार गर्ने हामी नेपाली किन पुग्न पर्ने ठाउँमा नपुगेर बीच बाटोमै गल्छीमा,
ओढारमा, भीरमा, भञ्ज्याङमा, खोलामा, खाल्डोमा, सोतामा र सोत्तरमा अल्झिरहेका छौँ ? हामी गन्तव्यस्थलमा ओर्लिने समय किन अझै आएन । यति उत्कृष्ट मोडेलको गाडीमा चढ्दासमेत हामी नेपाली जानुपर्ने ठाउँमा जान नसक्ने ? यसको दोषी को हो ?
राजनीतिमा जनताको गुनासो बढ्ने थिएन । राजनीतिमा जनताको आशा ओइलाउने थिइन । राजनीतिमा जनताको आक्रोश बढ्ने थिएन । राजनीतिमा जनताको भविष्य भत्किने थिएन । यो सबै हुनुका पछाडि ड्राइभरकै कमी र कमजोरी हो ।
आज हामी नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई विश्वसामू देखाएर दाँज्दैछौँ र भन्दछौँ– हाम्रो व्यवस्था विश्वकै नमुनाको व्यवस्था हो र उत्कृष्ट व्यवस्था हो । तर यति उत्कृष्ट व्यवस्थाको गाडीमा सवार गर्ने हामी नेपाली किन पुग्न पर्ने ठाउँमा नपुगेर बीच बाटोमै गल्छीमा, ओढारमा, भीरमा, भञ्ज्याङमा, खोलामा, खाल्डोमा, सोतामा र सोत्तरमा अल्झिरहेका छौँ ? हामी गन्तव्यस्थलमा ओर्लिने समय किन अझै आएन ।
यति उत्कृष्ट मोडेलको गाडीमा चढ्दासमेत हामी नेपाली जानुपर्ने ठाउँमा जान नसक्ने ? यसको दोषी को हो ? यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? हामी विकास र समृद्धिको यात्रै गर्न नपाउने ? हामी विकास समृद्धिको स्थल नै पुग्न नपाउने ? हामी शान्ति र क्षम्न चयनको धर्ती नै स्पर्श गर्न नपाउने ? हामी सधैं गाडी चढ्ने मात्रै कहिल्यै गन्तव्यमा नपुग्ने ? यसो हुनुमा चालकको दोष हो कि होइन ?
नेपाली जनतालाई गाडीमा राखेर यात्रा गर्नुअघि टायर पंचड हुने । बीच बाटोमा हावा खुस्कने ? बीच बाटोमै पट्टा भाँच्चिने । बीच बाटोमै स्टार्ट बन्द हुने । बीच बाटोमै पेट्रोल सकिने । बीच बाटोमै कुनै न कुनै अवरोध सिर्जना हुने अवस्था किन आइरहने ? यदि चालक सचेत र सतर्क छ भने त यी र यस्ता यावत कुराहरू पहिले नै ठीक अवस्थामा राखेर गाडी हाँक्नु पर्ने हो कि होइन ?
गाडी गुडीसकेपछि त्यसको मर्मतमा लागेर पनि गन्तव्य स्थलमा भनेको समय सीमामा पुग्न सकिन्छ ? त्यति मात्र होइन आजसम्म गाडी यथासमयमा यात्रुलाई बोकेर ओर्लनु पर्ने स्थलमा ओर्लेन–ओर्लेन । यसले केसम्म पनि ग¥यो भने आफू हिड्ने दिशा नै पत्ता लगाउन सकेन । बडो बिडम्वना नै भन्नुपर्दछ, नेपालको इतिहासमा स्थलमार्थमा गन्तव्यहीन भएको यात्रुबाहक गाडी भनेको नै लोकतान्त्रिक नयाँ मोडेलको गाडी हो ।
विगतका पुराना गाडीले जसरी नेपाली जनतालाई जानुपर्ने स्थानमा पु¥याएनन्, यसले पनि पु¥याउँला भन्ने कुरामा कुनै निश्चिन्त हुन सकिने अवस्था छैन । नेपाली जनताले आफू यात्रुका रूपमा रहेर पटक–पटक जिज्ञासा राख्दा र प्रश्न गर्दा निस्कने आवाज नै यो हो कि ‘अब हामीले हाम्रो भविष्य बनाउने स्थलमा ओर्लिने समय कहिले हो ?’
चालक, सञ्चालक, सारथी, ड्राइभर तथा नेतृत्व तहबाट आउने जवाफ ‘हामी यात्रामा नै छौँ र अवश्यमेव हामी त्यहाँ पुग्छौँ र विकास र समृद्धिको गेट खोल्छौँ भने पनि यो निर्धारित समयभन्दा निकै ढिलो भएको आभाष हुन थालेको छ ।
यदि पाँच घण्टामा सम्पन्न हुने यात्रा १० घण्टामा पनि सम्पन्न हुन सक्दैन भने त्यसको जवाफदेही को हो ? यात्रा गराउनेका लागि यो समय पर्याप्त नभएता पनि गाडीभित्र बसेर यात्रा गर्ने यात्रुहरूका लागि भने निकै झन्झटिलो र आक्रोशपूर्ण बनेको छ ।
यात्राका कुरामा आरामदायी सिटको कुरा पनि त्यति नउठ्ला, गाडीको चमकदारका कुरा पनि नउठ्ला, गाडी भित्रको अवस्था र व्यवस्थाका बारेमा पनि कुरा नउठ्ला तर गाडी चलाउने ड्राइभर र जानुपर्ने ठाउँ र समयका बारेमा पक्कै पनि कुरा उठ्छ, उठ्ने छ र उठ्दै जानेछ ।
त्यसैले अहिले हामीले नेपालमा भित्र्याएको नयाँ मोडेलको गाडी जो लोकतान्त्रिक गाडी हो, त्यसको रूप, रंग, कम्पनी, संरचना, बनौट, छनौटभन्दा पनि यसले नेपाली जनतालाई पु¥याउने कहाँ को र पु¥याउने कहिले हो ? यो नै प्रमुख विषय हो ? पुग्ने गन्तव्य स्थलकोले पहिले नै निर्धारण भएको कुरा हो । तर पुग्ने ठेगान र समयको कुनै घेरा, सीमान र पावन्दी भएन ।
यात्रुलाई गाडीमा बोक्ने अलि परसम्म पु¥यायो, फेरी बिसायो । अलि परसम्म घिसा¥यो, फेरी बिसायो । यसरी आधा घण्टा यात्रा गर्ने र एक घण्टा विश्राम गर्ने हो भने पुग्ने कहिले ? गाडीको विश्रामस्थल कहाँ–कहाँ हो ?
जहाँ पायो त्यही बिसिने कि निर्धारित स्थलमा पुगेपछि मात्र बिसिने ? यो कुरा बुझ्ने कसले ? यो कुरा बुझाउने कसले ? सधै यात्रु छट्पटाउँदा समेत डा«इभरले ध्यान दिने कि नदिने ? हामी कति मिनेट, कति घण्टा, कति दिन, कति महिना, कति वर्ष र कति दशक यो भविष्यको यात्रा गरिरहने हो ?
के हाम्रो नसिपमा उज्ज्वल भविष्यको गन्तव्य नै छैन ? के हामीले सफलताको यात्रा नै पार गर्ने अवस्था छैन ? के हामी सधैं गाडीको धुवाँ र धुलो खाएर मात्र यात्रा गरिरहने हो ? के हाम्रो यात्रा टुङ्गीने अवस्थाको छैन ? यदि यसो होइन भने हाम्रो गन्तव्य स्थल खै ? किन देख्न पाइएन ? यदि यसो होइन भने हाम्रो गन्तव्य स्थल कै ?
किन देख्न पाइएन ? किन टेक्न पाइएन ? किन झर्न पाइएन ? किन ओर्लिन पाइएन ? किन भोग्न पाइएन ? यो प्रश्न गर्ने बेला हो कि होइन ? यो समय हतार गर्ने समय हो कि होइन ? यो समय अत्तालिने समय हो कि होइन ? यी सबै यात्रुका चासो र गुनासो सुन्ने कसले ? जसले गाडी हाँक्छ, जसले व्यवस्था हाक्छ, जसले गाडी चलाउँछ, जसले देश चलाउँछ, उसले र उसको टिमले जिम्मेवार बहन गर्ने कि नगर्ने ?
विकासित राष्ट्रका लागि दश मिनेटको समय पनि उद्यमशील काम र धन्दामा व्यतित हुन्छ । तर हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशमा त १० वर्षको समय अर्थात् दशक नै बिते पनि त्यो समय अभ्यास, कसरत, कोसिस, जमर्को, योजना, अनुभव, सिक्ने र सिकाउनेमा व्यतित हुन्छ ।
त्यसले त हामीजस्ता मुलुक आज २१औँ शताब्दीमा आउँदा पनि विकास र समृद्धिको ताते–तातेमा छौँ । हामी आफ्नो यात्राका क्रममा समयको सीमा भंग भए पनि कुनै फरक परेन । हामी आफ्नो यात्राको क्रममा गन्तव्यस्थल नभेटिए पनि कुनै फरक परेन ।
हामी आप्नो यात्राको क्रममा गाडी नै दुर्घटनामा परे पनि फरक परे । लाग्दछ कि हाम्रो यात्रा नै उद्देश्यहीन र लक्ष्यहीन छ । यदि हामी हाम्रो यात्रा निश्चित उद्देश्य, निश्चित लक्ष्य र निश्चित गन्तव्य सहितको हुन्थ्यो भने आजको यो दिनमा यसरी कुहिराको काग बन्नु पर्ने थिएन ।
आज यो रूप, रंगमा नै अल्झियौँ र बल्झियौँ । तर हाामीले कहिल्यै पनि गाडी चालकलाई खबरदारी गरेनौँ । गाडी चालकलाई सचेत बनाएनौँ । ड्राइभरको कहिल्यौ निगरानी गरेनौँ । हामी केवल जाने ठाउँ र बसेको वा चढेको नयाँ रंगको गाडीमै आफ्नो सहमति जनायौँ र स्वीकार्यता प्रदर्शन ग¥यौँ । जुन कमजोरी भयो ।